Flamingos an’arivony hita faty tao Anatolia Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Fomba fambolena na haitany no mety ho anton'ireo fahafatesana faobe
Voadika ny 21 Jolay 2021 12:06 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, বাংলা, عربي, Español, Português, Français, English
Flamingo maty tao amin'ny farihin'i Tuz. Pikantsary nalaina avy amin'ny lahatsarin'ny The Independent “Fahafatesana faoben'ireo flamingos nandritra ny fahamainan'ny farihy tao Tiorkia, nalaina tamin'ny ‘drôna'”
Ny farihy Tuz (Farihy Masira), farihy iray mihidy ao amin'ny faritany Anatôliàna Afovoany ao Konya, no farihy lehibe indrindra ao Tiorkia. Toeram-ponenan'ireo karazana tsy fahita raha tsy ao an-toerana ity io, miainga amin'ireo vorona, bibikely, biby mampinono ary ireo karazan-javamaniry. Tamin'ny 2000, nambara ho faritra iray arovana noho ny hamaroam-piainana misy ao aminy ilay farihy. Toeram-ponenana vonjimaika ihany koa izy io ho an'ireo vorona marobe mpifindra monina — isan'ireny ny flamingos. Mety tsara ho an'ny fikotrehana sy famahànana no sady ahafahan'ireo flamingos ihany koa mitaiza ny zanany ilay farihy, lavitry ny horohoro aterak'ireo mpihaza. Ireo farihy kely manodidina azy no loharanon-tsakafo ho an'ireny vorona ireny.
Noho io antony io, isantaona rehefa volana Martsa, an'arivony maro ireo flamingos no mifindra monina mankao amin'ny atsimon'ny Farihy Tuz, nahatonga azy ho voaosotra anarana ho “paradisan'ny flamingo.” Araka ny lazain'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampiroboroboana ny Tanandehibe, nisy 12.746 ireo flamingos foy teo tamin'ny 2018, ary tamin'ny 2019 dia nahatratra 20.381 no isan'ireo flamingos. Isantaona, raha kely indrindra dia flamingos 10.000 no foy eo. Fa nisedra olana tsy nampoizina ny vanimpotoana fifindramonina tamin'ity taona ity — nisy zanaka flamingos 5.000 teo no hita maty tao.
Lazain'ny sasany fa anton'ireo fahafatesana ny haintany mamely an'i Anatolia Afovoany — faritra iray tena maina manokana izay vao mainka koa nianjadian'ny fiakaran'ny maripàna bebe kokoa. Tamin'ity taona ity, nihataka efa ho any amin'ny 10 kilaometatra any ho any ireo rano tao amin'ny Farihy Tuz. Tsy vitan'ny sasany tamin'ireo flamingos foy teto ny namonjy ny rano ary dia matin'ny tsy fahampian-tsakafo. Mehmet Emin Öztürk, mpakasary ny fiainan'ny biby, nilaza tamin'ny TRT hoe:
Toy ny paradisa ho an'ny vorona no endrik'ity faritany ity taloha. Rehefa tonga teto aho tamin'ity taona ity, helo no hitako. An-jatony maro, raha tsy an'arivony mihitsy aza ireo flamingos no hita maty, ary tena nihena be tokoa ny isan'ireo andiam-borona. Rehefa tonga aty amin'ity faritra ity aho fahiny, dia faritra mando no teto, fa amin'izao fotoana izao, be vovoka izy. Efa ho 10 kilaometatra no nihemoran'ny rano. Tena fanairana henjana ity.
Ny hafa indray nitanisa ny fomba fambolena ampiharin'ny firenena ho toy ny antony niteraka io zavadoza tamin'ity taona ity io. Navilin'ireo tohodrano napetraka tamin'ireo lakandrano eny akaikiny ny rano tsy ho ao amin'ilay farihy, ary tafahoatra loatra ny fitrandrahana ireo loharano ambanin'ny tany. Raha niresaka tamin'i Demirören Haber Ajansı, filoha lefitry ny Fikambanan'ireo Mpakasary Aksaray, dia hoy i Fahri Tunç :
Lazaina fa tsy misy rano intsony tavela any amin'ireo lakandrano ao amin'ny faritra, nefa tsy izany no zavamisy. Mifanohitra amin'izany, misy zavatra najoro hibahanana azy ireny, ary amin'ny alàlan'izy ireny, avily ny rano ho any amin'ireo faritra fambolena. Vokatr'izany, tsy misy rano tonga ao amin'ny Farihy Tuz, ary tsy afaka mahazo sakafo sy rano ireo biby. Manao antso amin'ireo manampahefana aho: tokony hahasarotiny antsika io raharaha io.
Tunç nanoritsoritra ny fahafatesan'ireo vorona ho toy ny fandripahana, tsy ny flamingos irery ihany fa ireo karazany hafa ihany koa.
Tanaty antsafa iray niarahana tamin'ny Hurriyet Daily News, niaiky i Dicle Kılıç, filohan'ny Fikambanana Tiorka miaro ny Natiora, fa ireny “pôlitikam-pambolena sy fanondrahana diso” ireny no tokony ho tsiniana, fa tsy ny haintany.
Tsy noho ny fahamainan'ireo lakandrano mamatsy ny farihy. Fa avy amin'ny sehatra / rafitra. Misy rano ao amin'ny lakandrano. Fa tohanana tsotra izao ireo rano tsy ho any amin'ilay farihy. Afaka hitanao ao anaty lahatsary izany. Ny namantsika Fahri Tunç no nandefa ireny sary rehetra ireny ho antsika.
Nolavin'i Bekir Pakdemirli, Minisitry ny fambolena sy ny Ala ny fisian'ny fifandraisan'izany amin'ireo tohodrano ao amin'ilay faritra. Raha nandray fitenenana nandritra ny hetsika iray natao tao Istanbul, dia hoy ilay minisitra:
Araka ny fitsirihana nataon'ny sekoly fianarana ho mpitsabo biby ao amin'ny Anjerimanontolo Selcuk (Konya), tsy misy ahitana taratra fahapoizinana mihitsy. Rehefa tsy ampy ny rano, miampy ny fiakaran'ny tahan-javatra ao anatin'ny rano, dia fahafatesan'ireo flamingos izay tsy afaka ny hanidina no hitantsika. Tiako ny hanipika fa tsy misy mihitsy fifandraisana, na mivantana na ankolaka, eo amin'io tranga io sy ireo lavadrano ao amin'ny faritra na ny fanondrahana ny tany fambolena.
Ny Governoràn'i Konya dia namoaka fanambaràna iray tao amin'ny tranonkalany, nilazàny fa ny ao amin'ny biraon'ny governora dia nanangana kaomisiôna iray hanadihady ny momba ilay fahafatesana faobe nanjo ireo flamingos, ary nanome toky fa hikaroka vahaolana.
Taloha sy vaovao.